खाडीबाट श्रमिकको प्रश्न : ‘हामीले स्वदेश फर्किन नपाउने हो ?’ - समृद्ध नेपाल
मे/जुनको गर्मीले भतक्कै पोल्छ खाडीमा । त्यसैमाथि कामविहीन भएर महिनौंसम्म कोठाभित्रै बस्दाको छटपटी । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै स्वदेश फर्किन नपाएपछिको बेचैनी । अनि त्यही बेचैनीले गर्दा दिमागभरि मडारिन्छ निराशाको बादल ।‘अब त यहीँ मरिएला कि जस्तो छ उज्यालोको फेसबुक पेजमा
यूएईबाट सन्तोेष सुनार लेख्नुहुन्छ, ‘करार अवधि सकियो, काम छैन, कम्पनीले कोठा छाडेर निस्क भनिसक्यो । एक महिना त जसो तसो बाँचियो अब कसरी बाँच्ने सरकार ?सन्तोषसँगै उहाँका अरु साथीहरु पनि यही समस्या झेलिरहेका छन् । उडान खुल्लान् वा सरकारले उद्धार गर्ला भन्ने आशा पालेर बसेका छन् । तर न उडान खुल्ने खबर सुनिन्छ न त उद्धार गर्ने । ‘परदेशीको पक्षमा नेताले बोलेको समाचार नै सुनिदैन हाम्रो सरकार कहाँ हरायो’, सन्तोष प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
गएको वैशाख २३ गते मध्य रातिदेखि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो । त्यसैमाथि यूएईले गएको बैशाख २९ गतेदेखि नेपालसहित चार देशका नागरिकको प्रवेशमा पनि रोक लगायो । लामो समयदेखि उडान बन्द भएका कारण अहिले धेरै नेपाली खाडी तथा मलेसिया लगायतका देशमा अड्किएका छन् । सन्तोष जस्तै करार अवधि
सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि साउदीबाट रवि बराल घर फर्किन पाउनुभएको छैन । बन्द भएका उडान चाँडै खुल्लान् भन्ने आशामा आफूसँग भएको पैसा पनि घर पठाएपछि अहिले उहाँ आपट सापट गरेर गुजरा चलाइरहनुभएको छ । नियमित उडान नगरे पनि सरकारले उद्धार उडान गरिदेओस् भन्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘साथमा भएको पैसा घर पठाइयो, अहिले साथमा खाने पैसा पनि छैन रवि भन्नुहुन्छ, ‘न काम नै दिएको छ कम्पनीले । जेनतेन गरेर साथीभाइसँग मिलेर गुजारा चलाइ रहेको छु, सरकारले हाम्रो पीडा सुनोस् ।’खाडी देशमा जस्तै मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको पीडा पनि उस्तै छ । धेरै नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य देश मलेसिया लामो
समयदेखि लकडाउनमा छ । कोरोनाको तीव्र संक्रमण रोक्न त्यहाँको सरकारले पटक पटक लकडाउन लम्ब्याइरहेको छ । तर यसको मारमा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक परेका छन् । लकडाउनसँगै कतिले रोजगारी गुमाएका छन् भने कति घर फर्किनैपर्ने अवस्थामा पनि फर्किन पाइरहेका छैनन् ।
मलेसियाबाट जीवन धामी कम्पनी बन्द भएसँगै तलब दिन पनि रोकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । बस्न दिएको तर खाने कुरा सबै आफैँले जाहो गर्नुपर्ने र साथमा पैसा नहुँदा निकै समस्या भइरहेको उहाँ दुखेसो पोख्नुहुन्छ । ‘कम्पनी बन्द भएपछि हामी धेरै नेपाली साथीले दुई महिनादेखिको तलब पाएका छैनौं, खुल्ने नखुल्ने कुनै टुंगो छैन उहाँ भन्नुहुन्छ,
यस्तोमा हामीले कि त घर फर्किन पाउनुपर्यो, कि त दूतावासले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।मलेसियाबाटै राजु खड्का नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै भन्नुहुन्छ ‘नियमित उडान गर्न नसके पनि उद्धार उडान गरेर भए पनि हामी परदेशीलाई आफ्नो देश फर्किन देउ ।’
उदयपुर जोड्ने झोलुङे पुलमा टेम्पो गुडाउँदै एक साहसिक चालक !
मरण होस त यस्तो ! बिवाह मण्डपमा खाएको कसम पुरा गरे बैतडीका एक प्रेमीले !
नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरले स्थापना गरेको विपद कोषमा सहयोग जुट्ने क्रम सुरु !
धोकेवाज पत्निले ५ वर्षको छोरा र माया गर्ने पतिलाई धोका दिएर हिँडिन् !
परिवारभित्रै संक्रमण तीव्र !